Ubukhosi bethembe iSilo ngolomhlaba - Ilanga News
Home Izindaba Ubukhosi bethembe iSilo ngolomhlaba
Ubukhosi bethembe iSilo ngolomhlaba
Buthi bunamasheya eSodwana Bay Lodge kodwa kabuzuzi lutho
SEBUWABEKE eSilweni uMisuzulu (osesithombeni) amathemba abo ubukhosi bakwaMbila, kwaZikhali, eSodwana Bay, ngodaba lomhlaba obuthi buwudlelwe yiSodwana Bay Shareblock LTD, engabanikazi bendawo yezokungcebeleka,
iSodwana Bay Lodge.
ILANGA langomhla ka-10-12 kuNhlangulana (June) labika ngokukhala kwalobu bukhosi, buthi kunezindlu zezivakashi eziwu-21 eSodwana Bay Lodge, okumele imali yazo itholwe yibona, kodwa kabukaze buthole ngisho indibilishi yize kunesivu-melwano sokuthi bunamasheya awu-70% kuzona.
Bathi lesi sivumelwano sasayi-nwa ngo-1989 nenkosi yesizwe, uMoses Zikhali eseyakhothama.
Lobu bukhosi buthi buzamile ukuxoxa nabanika beSodwaba Bay Shareblock, abaphakamisa ukuthi bazobunika u-R100 000 ngenyanga ngalezi zindlu eziwu-21, kodwa bangavumelana njengoba babufuna u-R150 000 ngenyanga.
Ilungu lendlu yobukhosi bakwaZikhali, uMnu Ben Zikhali, lithi ngenxa yokungalungiseki kwalolu daba, bagcine bexhumana neBlack Land First (BLF), bayiqashisela lezi zindlu zabo eziwu-21, basayina isivumelwano sonyaka esiphela ngoNdasa (Mach) wangonyaka ozayo.
“Athelekile amulungu eBLF ngomhla ka-16 kuMbasa (April) njengokwesivumelwano, kwaqa-guliswana nomlungu ophethe le nkampani, uMnu Regard Scott, wagcina ebadedele, okhiye wavuma ukuthi akanawo amaphepha amnika ilungelo lokusebenzisa lezi zakhiwo.
“Emuva kwezinsuku ezintathu ededele okhiye, wafaka iBLF enkantolo eyakhipha isikhonzi sayo ukuba siyoyisayinisa ukuba iphume iphele yize indawo eyiqa-shile kungeyesizwe. Iyaqhubeka iBLF iyayisebenzisa indawo,”esho.
Uthi isizwe sesike samasha, saqonda eSodwana Bay Lodge, si-khononda ngokuthi makubuyiswe konke okungokwaso, amasheya nebhizinisi, kodwa kwangalunga.
“Kuningi esesikuzamile ukuhlala phansi nabanikazi benkampani kuxoxwe kodwa baqinisa amakha-nda,” kusho uMnu Zikhali.
Uthi amathemba abo sebewabe-ke eSilweni uMisuzulu kaZwelithini ukuba singenelele, bangadlelwa umhlaba sikhona.
Ekhuluma neLANGA uMnu Scott, ukuvezile ukuthi sekugasele amalungu eBLF kodwa wathi udaba uselufake enkantolo, ucele ukungakhulumi kakhulu ngalo.
USihlalo weBLF KwaZulu-Natal, uMnu Zizamele Dlamini, uthe bangene njengabantu abaqa-she indawo ngoba bebefuna ukwenza uqeqesho khona, kodwa okuthe sebengaphakathi, isizwe sabacela ukuba balekelele kubu-yiswe umhlaba waso.
“Okwamanje siphezu kwaleyo mizamo yokusiza abantu balesi sizwe. Kasisatshiswa-ke ngezinka-ntolo thina, sizobalwela kuze kube sekugcineni,” kusho uMnu Dlamini.
Okhulumela iNdlunkulu kaZulu, uMntwana Thulani Zulu, uthe uma abakwaZikhali befuna udaba lulalelwe yiSilo, mabalinde size sibe-kwe ngokusemthethweni, hhayi okwamanje njengoba kusekhona izinkinga.
Previous articleIChiefs kuyisizile ukweyiwa kwiCaf: Arthur Zwane
Next articleUmsolwa ‘ushiswe wafa’ wumphakathi